एमसीसी पास गरौं : बाबुराम - EKalopati
एमसीसी पास गरौं : बाबुराम
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने बताएका हुन् । उनले एमसीसी र बीआरईलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएका छन् । त्यसैगरी डा. भट्टराईले एमसीसीमाराष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
‘यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौं : १ उच्चस्तरीय राजनीतिक/कुटनीतिक वार्तामार्फत भारतसँगका सबै विवाद हल गरी असल छिमेकी बनौं, २ चीनसँगका BRI पारवहन लगायत सम्झौता कार्यान्वयन गरौं, अमेरिकासँग चिठी आदानप्रदान सहितः MCC कार्यान्वयन गरौं । युवा देशमा बसे र समृद्धि भए नै राष्ट्रियता बच्नेछ भन्ने बुझौं !’
Previous articleरासायनिक मल बिक्री गर्न भारत सहमत
Next articleसात जिल्लाका प्रजिअलाई मन्त्री खाँणले भने, ‘छिटो उद्धार र राहतमा खट्नू’